Maalqabeenkii muddo kooban ku khasaaray 2 bilyan oo doolar |
Maalqabeenkii muddo kooban ku khasaaray 2 bilyan oo doolar
Barnaamijka isbuuclaha ah ee The Boss, oo BBC-da ka baxa waxaa lagu wareystaa hoggaamiyeyaasha ganacsiga ee guud ahaan dunida, kuwaas oo taariikhdooda lagu soo bandhigo. Isbuucan waxaan la hadalnay Andrew Rickman oo ah ganacsade hormuud ka ah dhinaca tiknoolojiyadda.
Sideed dareemi lahayd haddii aad hal habeen gudihiisa ku weyso in ka bada £1.4bn (oo u dhiganta $1.81bilyan oo doolar)?
Xaaladdaas waxay ku dhacday Andrew Rickman, dabayaaqadii sanadkii 2000.
Xilligaas waxaa soo wajahay khasaare sababay in uu hoos u dhac weyn ku yimaado saamiyadii shirkaddiisa oo lagu magacaabo Bookham Technology.
Mar qura waxaa soo ifbaxay shirkadaha bixiya adeegga internet-ka ee loo yaqanano “dotcom”, taasoo sababtay inay burburaan dhammaan shirkadihii waaweynaa ee suuqa heystay.
“Waxay ahayd sidii khasaaraha hubka nuclear-ka,” ayuu yiri isagoo dib u xasuusanaya.
Andrew wuxuu shirkadda Bookham aasaasay sanadkii 1998-kii, fikirkana wuxuu la yimid isagoo ku jira jikada gurigiisa oo ku yaallay Wiltshire, xilligaasna wuxuu ahaa 28 jir.
Waxay shirkaddiisu durba noqotay mid ka mid ah ilaha ugu waaweyn ee laga helo adeegyada tiknoolojiyadda iyo isgaarsiinta.
Marka si fudud loo qeexo, wuxuu abuuray tiknoolojiyad sahleysay in xogta si dhakhso ah la isu gudbiyo iyadoo la isu marsiinayo leesarro iftiin ah iyo quraarado.
Markii lasoo gaaray baqayaadaqii 1990-meeyadii, ganacsiga shirkaddiisa iyo iibkeeda ayaa kor u kacay, iyadoo guriyo badan lagu sii xirayay adeegga internet-ka, sidoo kalena telefoonnada gacanta lagu adeegsanayay Internet-ka uu sahlay.
Xaaladdu waxay ahayd mid aad u fiican, ilaa heer ay shirkadda Bookham qiime sare ka saarto suuqa saamiyada ee UK, bishii April ee sanadkii 2000.
Muddo labo bilood gudahood ah ayey ugu biirtay 100-ka shirkadood ee saameynta ugu ballaaran ku leh suuqa kala iibsiga saamiyada.
Dhaqaalihii shirkadda ayaa cirka isku shareeray, Andrew, oo saamiga ugu weyn ku lahaana wuxuu noqday bilyaneerkii ugu horreeyay ee UK ee dhinaca tiknoolojiyadda.
Warbaahinta ayaa billowday inay hadal heynta ugu ballaaran ka dhigtaan.
Wariyeyaashu waxay aad ugu faraxsanaayeen inay akhristayaashaooda u sheegaan in ninkan uu ka maal badan yahay marka la isku daro hantida boqoradda Ingiriiska Elizabeth II iyo Sir Paul McCartney.
Markii ay heerkii ugu fiicnaa mareysay Bookham, xagaagii sanadkii 2000, Andrew wuxuu heystay adduun lacageed oo ka badan £1.5bn.
Laakiin markii uu dhacay khasaarihii dotcom bubble, dabayaaqadii isla sanadkaas, waxaa mar qura burburay saamiyadii shirkadda Bookham iyo hantidii Andrew.
Arrintan waxay mar kale kusoo jeedisay warbaahinta, kuwaasoo markan baahinayay guuldarradiisa.
“Si gaar ah ugama aanan fikireynin waxa ay warbaahinta iga sheegayeen,” ayuu yiri Andrew, oo hadda 59 jir ah. “Lacagtu ma ahayn muhiimadda, sababtoo ah waxay ku qorneyd kaliya wargeysyada. Inaan noqdo bilyaneerkii ugu horreeyay ee dotcom waxay ila ahayd riyo”.
Hoos u dhaca shirkaddiisa waxaa horseeday in dhammaan macaamiishii ku xirneyd ay u weecdeen shirkadaha mowjadaha ahaa ee la yimid adeegyada internet-ka ee raqiiska ah.
Halkaas waxaa ku burburay ku dhawaad 2 bilyan oo doolar oo ku jiray ganacsiyadii shirkadda.
Laakiin nasiib wanaag, Andrew wuxuu xilligaas heystay £50 malyan oo gini, oo bangiga ugu jirtay, taasoo uu si tartiib tartiib ah dib ugu abuuri karay ganacsigiisa.
Ugu dambeyn wuxuu shierkaddiisii hore faraha kala baxay sanadkii 2004-tii, wuxuuna billaabay xirfad cusub oo ah inuu maalgashado tiknoolojiyadda.
Markii lasoo gaaray sanadkii 2013-kii wuxuu billaabay shirkaddiisii ugu dambeysay – Rockley Photonics.
Adnrew wuxuu saadaaliyay in shirkaddiisa ugu dambeysay ee Rockley Photonics ay sanadkiiba iibin karto adeegyo ku kacaya balaayiin gini, ayna heer aad u sarreeya sii gaareyso.